မုံးဇာတုံး ဖြစ်ဖို.ကံ ပါရေထင်ပါယင့်။
ရခိုင် အစားအသောက် ဘလော့ လုပ်ချင်စော်က တော့ ကြာပါဗျယ်။ စမယ်စမယ် နဲ. ၂နှစ်ကျော်လားခရေ။ အဆင်သင့်ဖြစ်မှ ဟိုဟင့် ရှိမှ အေပိုင်စော်မှလို. လုပ်နီကေ တသက်လုံးလုပ်ဖြစ်ဖို.မဟုတ်ပျယ်လို. အခု ကျားနောက်ကလိုက်ပိုင် စပလိုက်ရပါရေ။
အကျွန်.အမိကတော့ အကျွန် အစားအသောက် အချက်အပြုတ်အကြောင်းကို ရွီးချင်ရေဆိုစော်ကြားကေ သူတော်မနဲ. ခေါင်းဖြီးနဲ.ပိုင် လို.ထင်ပါဖို.။ အကျွန် အခုထက်တိ ဟင်းတခု မည်မည်ရရ ပပိုက်နနိုက် ချက်ဖို.မတတ်သိ။ ယင်းပိုင်လူက ချက်နည်းပြုတ်နည်းအကြောင်းကို ရွီးဖို.ဆိုကေ ရခိုင်ဟင်းတိ နာမည်တောင်မှ ပျက်လီဖို.။ ယေကေလေ့ အခုမှ သင်ကေါဝါ မတတ်ပါလို.လား။ အချိန်မမီလို.လား။ တတ်ဖို.စော်အဓိက၊ အဂုတတ်စော်က လုံးဝမတတ်စော်ထက်ပိုကောင်းရေ မဟုတ်လား။ အဂုသင်ယင်းနဲ. လူများတိကို Share လုပ်မေ။
ဇာဖြစ်လို. ရခိုင်အစားအသောက် ဘလော့တခု လုပ်ချင်ရလေဆိုဂေ
၁။ ရခိုင်ဘလော့ တက ဘလော့ အများကြီး၊ အစားအသောက် အကြောင်းကို ရွီးထားစော် ဇာနှစ်ခုရှိလေ။ မရှိ။
၂။ နိုင်ငံရေးမှာ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်စော်ရှိရေ။ အတွေးအခေါ်မှာ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်စော်လူရှိရေ။ ကဗျာကိုမခံစား တတ်တေလူရှိရေ။ အစားအသောက် ကိုမကြိုက်တေလူမရှိ။ ဇာနေရာမှာ သွီးကွဲချင်ပိုင် ကွဲလီပတ်စီ။ အေနေရာမှာတော့ အစားအသောက်ကို မကြိုက်လို. ကော်နှက်ပခရေလို.တော့ ရှိဖို.မဟုတ်လို. မျှော်လင့်ပါရေ။
၃။ အေဘလော့ရွီးရေနေရာမှာ ပြည်တွင်းက လူတိအတွက်မရည်မှန်းထားပါ။ ကိုယ်ရို. ပြည်ပကိုရောက်နီရေလူတိ၊ အေမှာရစော်ပစ္စည်းချေတိနဲ. ကိုယ့်ပြည်က ထမင်း ဟင်း ပိုင်ဖြစ်အောင် ဇာပိုင်ချက်ရလေ သိချင်လို.၊ သိအောင်လို.ပါ။
အေဘလော့ ကို ဇာပိုင်လောင့်ခ်ျ လုပ်ရဖို.လဲ တောင် မစဉ်းစားထား။ ကြည့်ရစော် Facebook လောက်မှာပဲ ကြေညာ လိုက်ပါဖို.ဗျယ်။ ကောင်းကေ လူလာလိမ့်မေ။ မကောင်းကေ မလာ။ ထရက်ဖစ်ကို ကြည့်ပြီးကေ ဘလေ့ာကို update လုပ်လားပါဖို.။ အားလုံး လာဖတ်တေလူတိမှာ ချက်နည်းပြုတ်နည်း ရှိကေပဲ ဖြစ်ဖြစ် စားချင်စော်ရှိကေပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီးကေ စီဘောက်စ်မှာ ရွီးထားခလို.ရပါယင့်။